Ilaa hadda aan la garanayn dadweynaha guud, ururada iskaashatada danaha-wadareed - SCIC - waxay tiradoodu ahayd 735 dhammaadka 2017 waxayna korayaan 20% sannadkii. Waxay isu keenaan dhammaan daneeyayaasha xiisaynaya inay jawaab-wadareed ka bixiyaan arrin lagu sheegay dhul, iyadoo loo marayo qaab-sharciyeed adag.
SCIC waa shirkad ganacsi iyo iskaashato oo bulshada deegaanku ay si xor ah u soo gali karaan caasimadda kana qayb qaadan karaan maamul wadaag ah oo lama huraan ah: mid walba meeshu waa caddahay, sababtoo ah waxaa lagu maamulaa xeerar sharci (sharciga shirkadda, iskaashiga iyo maamulka deegaanka) iyo qandaraaska u dhexeeya xubnaha. Horumarka hay'adaha ee u dambeeyay waxay xoojiyaan sharcinimada iyo mas'uuliyadda bulshada maxalliga ah, laga bilaabo degmada ilaa gobolka, ilaalinta iyo horumarinta hawlaha dhaqaalaha iyo adeegga bulshada ee dhulkooda.
Caqabadahan isdhexgalka bulshada iyo dhaqaalaha ayaa ku riixaya bulshooyinka si ay u abuuraan habab cusub oo wax qabad, qaabab cusub oo la cusboonaysiiyay oo iskaashi dawladeed iyo mid gaar loo leeyahay. SCICs waxay ka jawaabaan rabitaankan, iyagoo u oggolaanaya jilayaasha maxalliga ah iyo dadka deggan inay ka qayb qaataan horumarinta dhulkooda bulshooyinka maxalliga ah. Marka maamulka deegaanku uu ka qaybqaato SCIC, waxa ay la ciyaartaa door firfircoon oo ay weheliyaan jilayaasha kale ee maxaliga ah si ay u horumariyaan tayada iyo hufnaanta go'aan gaarista dadweynaha, si ay uga qayb qaataan sharcinimadiisa iyo si ay u xoojiyaan wadajirka bulshada iyo dhaqaalaha ee bulshada. .
Ujeedada tababarkani waa in lagu ogaado qalabkan cusub ee SCIC: mabaadi'da abuurista iyo hawlgalka, muuqaalka SCIC-yada jira, awoodooda horumarineed. Waxa kale oo aad ogaan doontaa hababka wada shaqayneed ee ka dhexeeya maamulada deegaanka iyo Scic.
READ Horumarinta tababbarka ee caafimaadka iyo caafimaadka-bulshada: mudnaanta koowaad ee France Relance
SCIC, oo ah iskaashato ka shaqeysa adeega dhulalka Diisambar 13, 2021Tranquillus
horePython 3: laga bilaabo aasaaska ilaa fikradaha horumarsan ee luqadda
socdadaacadnimada sayniska ee xirfadaha cilmi-baarista